Fampifanarahana Ny Atao Amin’ny Fiovana Toetrandro Henjana Ao Mali Sy Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2019 11:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, русский, 日本語, Deutsch, Italiano, Esperanto , English
Ao Mali, miha manome toerana ny tanihay ao Sahara ao avaratra ny ala. Ny faritr'i Kayes dia marika famantarana ny fandrosoana tsy azo ihodivirana ho tany hay ao amin'ny faritra izay nahitana ala nikitroka fahiny ka lasa faritra feno fasika midadasika sy vato no hita amin'izao fotoana izao.
Niresaka ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny faritra maliàne [teny anglisy] i Adrien de Chaisemartin sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny biraon'ny McKinsey ao Johannesburg, manao hoe:
Toy izao no fomba fanombanan'izy ireo ny zava-misy ankehitriny sy ny fahavoazana ara-toekarena ho an'ny firenena [teny anglisy]:
Ao Madagasikara, mbola tena loza kokoa ny vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro. Taorian'ireo rivodoza roa nifanesy (Giovanna tamin'ny taona 2012 sy Haruna tamin'ny taona 2013) izay nahakasika ny Nosy ary namindrana olona 100 000 fara-fahakeliny, notafihan'ny andiam-balala ny faritra atsimo. Hazavain'i Emmanuel Perrin eo amin'ny maxisciences ny fomba fifandraisan'ireo trangan-javatra ireo:
Noho izany, inona no azon'ny mponina eo an-toerana atao mba hanoherana ny fanafihan'ny toetrandro ny fomba fiainan'izy ireo? Indreto hevitra vitsivtsy an'i Michael Kleine sy ireo mpahay siansa mpiara-miasa aminy na ireo mpikaroka, niainga avy amin'ireo vahaolana an'ny Fikambanana Iraisampirenena'ireo Ivontoerana Fikarohana momba ny Ala (IUFRO):
Ny Dr. Balgis Osman Elasha dia nanipika ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana ny zava-misy eo an-toerana sy ny fahazoana tohana amin'ireo mpitarika vondrom-piarahamonina [teny anglisy] mba hametrahana ireo fepetra vaovao: